Olu luhlobo lwamagama asetyenziswa kakhulu ngabaqambi bezona zinto zibalaseleyo zokuqala Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukusuka Iicons8 iqhube isifundo esivelisa ezona fonti zisetyenzisiweyo kwaye loluphi olona manyano lusebenzayo ukuvelisa umyalezo ocacileyo kumfundi wewebhusayithi okanye ibhlog. Njengebhonasi, ikwabonisa ukuba ngaba abayili ngoku balandela iindlela kunye nezikhokelo esiziqondayo njengezinto zokulandela.
Ngendlela, asifuni ukuba ulibale ezinye zezithuba zethu kwiifonti zomdla omkhulu ukugcina usesikhathini kunye neyona typography yangoku Namhlanje, kunanini na ngaphambili Ukusetyenziswa kwemithombo eyahlukeneyo kwiwebhusayithi enye iyakwazi ukumisela uhlobo olucacileyo oluhambelana nomxholo ophambili wesiza.
Iimpawu 8 sele zidlulile Iiwebhusayithi ezingama-967 zokufumana iifonti ezisetyenzisiweyo ezingama-2.343 kuzo ezingama-500 zahlukile. Kufuneka kuthiwe iifonti zikaGoogle zisesona sithandwa kakhulu kwaye, ngelishwa, amagama eefonti ahlala engabhalwanga kakuhle.
Phakathi kwemithombo eqhelekileyo okanye ethandwayo esiyifumanayo Vula ii-sans, iRobot, iLato kunye neMontserrat. Elinye inqaku ekufuneka uligcinile engqondweni kukuba abayili besona siqalo sihle abazisebenzisi iifonti zendlela. Endaweni yoko bakhetha ukuphinda babeke kwifonti esekwe ngakumbi, njengoko ezinye zezoMgca weGoogle.
Kwaye i izitshixo ezibaluleke kakhulu kolu phando zezi:
Iifonti zenkqubo zisetyenziswa ngokubanzi.
Iifonti zikaGoogle zisetyenziswa ngokubanzi
Se basebenzisa ii icon ezininzi ukusuka kwimithombo yolwazi.
Akukho webhusayithi isebenzisa iiComic Sans.
Nantsi unayo ikhonkco kufundo olwenziweyo ngeemifanekiso 8. Kwiifonti ezintlanu ezaziwa kakhulu esizifumanayo IHelvetica Neue, edla ngokudityaniswa neMenlo; I-Menlo, ethi yona idityaniswe nee-Open Sans okanye i-Helvetica Neue; Vula iiSans, ezivana kakhulu noRoboto, Helvetica Neue noRoboto; URoboto, obonakala edityaniswa rhoqo noHelvetica Neue kunye neMenlo kunye neLato kunye neeSans Product; kunye naseSegoe UI, enokubonwa nge-Open Sans, Helvetica Neure okanye eGeorgia.
Isifundo esinomdla apho sinokuphefumlelwa khona ukukhetha ifonti oza kunika ngayo isitayile esininzi kunye nokunyanzela umxholo ophambili wewebhusayithi yethu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Imithombo » Isifundo sityhila iifonti ezisetyenzisiweyo kunye nokudityaniswa kwesona siphumo sikhulu kwiiwebhusayithi zokuqalisa
I-Instagram: ligalelo kwipotifoliyo yakho yobungcali